Owaqala ukukhipha amangwevu esemncane ethungela umshado wenza ezibukwayo kwimfashini. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
UMnu uNdumiso Madonsela, umsunguli weBeez Couture, yaseThekwini, KwaZulu-Natali
ITHALENTE kwimfashini lasheshe laziveza ensizweni yaKwaHlabisa, KwaZulu-Natali, isafunda u-Grade 6 mhla iqopha umlando idweba umsiko wengubo eyayizogqokwa wu-anti wayo mhla eshada.
Kusukela lapho uMnu uNdumiso Madonsela, oneminyaka ewu-27, akabange esabheke emuva kodwa waqhubeka nokudweba imisiko yengqephu esese-high school, waze wagcina ekufundela esephothule uMatikuletsheni.
Namuhla uMadonsela uwumsunguli wenkampani yemfashini yabantu besifazane iBeez Couture, nesizale eyezimpahla zabantu besilisa Inkosana by Beez.
Izintokazi ezikhangisayo zihlobe ngemisiko yeBeez Couture
UMadonsela uthi ukuchazeka kuka-anti wakhe ngengubo yomshado amdwebela yona kwamjabulisa kakhulu, kwamkhuthaza ukuthi aqhubeke nokudweba imisiko yengqephu.
“Sengenza u-Grade 8 ngiqhubekile nokudweba imisiko yengqephu, ngesekwa kakhulu wugogo, obevame ukungithengela amapeni okudweba nama-exercise (book) abegcwele imidwebo yami yengqephu.
“Okunye okwenze ngaqhubeka nokudweba wukuthi bengifunda e-boarding school, ngakho bengihlala ndawonye ngingeke ngiye ndawo, loko obekwenza ngithole isikhathi esiningi sokucabanga imisiko ehlukene,” kukhumbula yena.
Ngemva kokuphothula uMatikuletsheni ngo-2013, wenze izifundo zokusika ingqephu eLindiwe Kuzwayo Academy of Fashion Design. Uqede khona ngo-2015 esecijekile ngolwazi lwemfashini.
“Ngo-2016 ngaba matasa ngokuzihlupha ngolwazi lokuthi ngingaliqala kanjani ibhizinisi lemfashini, nokuthe ngo-2017 ngathola indawo yami yokuhlala ngenhloso yokusebenza ngokukhululeka. Kwakungelula, nabazali bami sebeqala ukuyingabaza yonke le nto, kodwa ngaphokophela ngoba ngangazi ukuthi ngifunani,” kulanda uMadonsela.
Ngo-2018 bathola indawo yokusebenzela nomngani wakhe ayesika naye ingqephu, nokuthe ngokuqhubeka kwesikhathi behlukana. Uthi: “Yilapho-ke engaqala khona iBeez Couture sengisebenza ngedwa ngo-2019.”
“Ngaqala ngahambela imibukiso yemfashini emikhulu njengeVodacom Durban July neDurban Fashion Fair, ngathola nethuba lokuxoxa nabeSelimathunzi ne-Top Billing. Loko kwangidonsela inqwaba yamakhasimende,” kusho yena.
Ukuzikhandla kukaMadondela kugcine kumweza izilwandle njengoba esebuya eLondon, e-United Kingdom, ukuyobukisa ngengqephu yakhe. Ugqokisa nosaziwayo abanjengomlingisi uThandeka Dawn King noDJ Happygal.
Ngonyaka odlule usungule Inkosana by Beez, eyenza izimpahla zabesilisa nezikhwama. Uthi loko ukwenze ngenxa yokuthi abesilisa bangasali njengoba ebegxile kwingqephu yabesifazane.
Esinye sezikibha nezikhwama ze-Inkosana by Beez
Uthi: “Ngosizo likaMasipala weTheku, izimpahla zeNkosana seziyatholakala ezitolo ezine eMega City, e-uShaka Marine, eMidway Crossing nasePavilion. Okwamanje ebhizinisini ngisebenzisana nabathungi abathathu, kanti izikhwama nezimpahla zabesilisa kuqala R450 kuya kuR600 bese imisiko yabesifazane iba wuR1 800 kuya phezulu.”
Unezinto afisa ukuzifeza ngomuso. Uthi: “Ngifuna ukuthi kwande isibalo sezitolo okutholakala kuzona umkhiqizo wethu futhi ngifisa nokusebenzisana nezinye izinkampani, ngiqhubeke nokugqokisa amaciko ehlukene.”
Facebook: Beez Couture PtyLtd/Inkosana By Beez